WARBIXIN: AFAR Jeer Ayuu Ku Guuleystay Ballon d’Or, Waxa Ku DAGAALAMAY Chelsea & Real Madrid, Xalay Ayuuna Kulankiisii Ugu Horreeyey Saftay – 12 Qiso Oo Ku Saabsan Xavi Simons – Laacibnet.net
August 6, 2020 Abdiwahab Ahmed
Bishii April ee dhoweyd ayay Xavi Simons da’diisu noqotay 17 jir, laakiin da’yarkani wuxuu bogagga hore ee warbaahinta haystay muddo sannado ah.
Waxa lagu tilmaamaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu maskaxda badan dhinaca kubadda cagta, farsamadooduna ugu sarrayso ee kasoo baxay kulliyadda da’yarta Barcelona ee La Masia, taas oo uu ku biiray sannadkii 2010kii.
Tababareyaasha jooga Camp Nou, waxay rajo weyn ka qabeen Xavi Simons oo u dhashay waddanka Netherlands, waxaanay u carbinayeen inuu noqdo xiddiga ay dunida kaga yaabsan doonaan, laakiin sannadkii 2019 ayuu si khilaaf ku jiro uga baxay kooxda, waxaanu ku biiray Paris Saint-Germain isagoo iska diiday inuu heshiis cusub u saxeexo Barcelona oo uu xilligaas qandaraaskiisu ka dhamaanayay.
Sidaas oo ay tahay, xalay fiidkii ayuu Xavi Simons dunida qabsaday, hadal hayntiisuna mar kale kusoo noqotay kaddib markii uu ciyaartiisii ugu horreysay ee heerka koowaad ah u saftay PSG kulankii saaxiibtinimo ee ay la ciyaareen Scohaux. Daqiiqaddii 74aad ayuu soo galay garoonka iyadoo lagu beddelay Julian Draxler, waxaana halkaas uga bilaabmaya hayaankiisa Parc des Princes.
Muddadii koobnayd ee uu garoonka ku jiray, waxa uu 17 jirkani muujiyey hibadiisa ciyaareed, waxaanu sawir kasii bixiyey sida Ciddii ILAAHAY ku simo ay indho sarcaad ugu noqon doonto xirfaddiisu.
Iyadoo ay xalay uuni ugu horreysay fagaareyaasha waaweyn, waxa layaab noqotay in ciyaartoyda waaweyn uu ka xoogsaday laaggista koorneyaasha oo uu isagu soo qaadayay, waxaanu halkaa ku sameeyey sharraxaad uu ku qancinayay tababare Thomas Tuchel inay tahay inuu kooxda koowaad ku daro oo uu waliba boos joogto ah siiyo.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa 12 arrimood oo layaab leh oo Xavi Simons uu leeyahay, kuwaas oo laga yaabo in aanad hore u maqal:
1. Aabbihii wuxuu ahaa ciyaartoy kubadda cagta ah – Waxa dhalay Regillion Si9mons oo weerarka uga ciyaari jiray kooxaha Fortuna Sittard, NAC Breda iyo Den Haag.
2. Wuxuu baraha bulshada ku leeyahay 2.4 milyan oo taageereyaal ah – Bartiisa Instagram waxa ku xidhan 2.4 milyan qof, waxaana layaab leh in markii uu 13 jirka ahaa ay 300,000 qof ku taxnaayeen.
3. Waxa loogu magac daray halyeygii Spain ee Xavi – Aabbaha dhalay Xavi Simons, ayaa taageere u ahaa Xavi Hernandez, waxaanu go’aansaday inuu magaciisa u bixiyo markii uu dhashay sannadkii 2003.
4. Xavi ayaa ah halyeyga uu ku daydo Xavi Simons – Da’yarkani waxa uu ku daydaa, aadna u jecel yahay halyeyga Barcelona ee Xavi Hernandez.
5. Chelsea iyo Real Madrid ayaa doonayey – Markii ay da’da Xavi Simons ahayd 12 jir, waxa dalbaday labada kooxood ee Real Madrid iyo Chelsea, laakiin Barcelona ayaa dhegaysan weyday dalabyadooda.
6. Inuu caawiye noqdo ayuu ka jecel yahay inuu gool dhaliyo – Waa sidii Xavi oo kale, waxaanu jecel yahay inuu gool caawiye noqdo oo uu saaxiibkii kubadda siiyo, halkii uu isagu ka dhalin lahaa.
Sannadkii 2017kii ayuu warbaahinta u sheegay: “Waxaan door bidaa inaan caawiyo halkii aan ka dhalin lahaa. Anigu waxaan muhiimad weyn u ahaa gool-caawinta.”
7. Afar jeer ayuu ku guuleystay abaal-marinta ciyaartoyda da’da yar ee ‘Youth Ballon d’Or’ – Ma jiro ciyaartoy sidiisa oo kale afar jeer ugu soo guuleystay abaal-marinta, sida uu qoray wargeyska The Sun.
8. Kooxda uu ku jiro, waxa u sahlan inay burburiso kooxaha kale – Simons wuxuu usoo ciyaaray da’yarta Barcelona. Xili ciyaareedkii 2016-17 waxay da’yarta Barcelona dhaliyeen 164 gool iyadoo kaliya laga dhaliyey 14 gool, waxaana shaqadan badankeeda qabtay Xavi Simons. Waqtigaas, waxa loo bixiyey naanays ah ‘Timo-dahable’, waxaanu ku guuleystay abaal-marinta Ciyaartoyga ugu qiimaha badan.
9. Wuxuu heshiis xayaysiin ah kula jiraa shirkadda Nike – Shirkadda qalabka ciyaaraha soo saarta ee Nike ayaa u aragtay Xavi Simons inuu leeyahay mustaqbal weyn, waxaanay siisay heshiis uu lacag badan kaga helo.
10. Wakiilkiisu waa Mino Raiola – Wakiilka caanka ah ee Mino Raiola ayaa sannadkii 2017 ku darsaday liiska ciyaartoyda gacantiisa ku jirta da’yarkan.
11. Wuxuu noqday maalqabeen lacag badan haysta – Isaga oo ay da’diisu yar tahay ayuu noqday maal-qabeen. Sannadkii 2016 waxay PSG u bandhigtay heshiis uu sannadkii ku qaadanayo lacag dhan Xavi Simons €1 milyan oo Euro, toddobaadkiina noqonaysa €20,000 Euro.
12. Neymar ayaa ka mid ah geesiyaashiisa – Simons ayaa la kulmay Neymar marar badan waqtigii ay wada joogeen Barcelona ee ay heerarka kala duwan ku jireen, waxaanu illaa hadda oo ay PSG wada joogaan uu ka mid yahay geesiyaashiisa.
XHAKA DP says:
Waaa wax cajiib ah runtii waa hadaan Ka hadlo aniga shagsi ahanteyda